Munamato weZvipiriso uye Chegumi. ? Muenzaniso une Simba
Munamato wezvipiriso Panguva yekupa zvinhu zvedu pamberi peIshe, zvinonyanya kukosha.
Zvipiriso zvinogona kusiiwa patemberi kana pachitoro kana isu tinokwanisa kuvapa zvakananga kune mumwe munhu asi isu tinofanira kugara tichiziva kuti Ishe vanofanirwa chikamu chemari yedu yemari.
Iyi ndiyo nheyo yatinoona mubhaibheri uye inounza makomborero asingaverengeki kuhupenyu hwedu. Mukugadzira mupiro tiri kupa yenyasha izvo zvatinogashira yenyasha uye zvinofanirwa kuitwa nemoyo unofara nekuti uyu ndiye unopa izvo Ishe vanokomborera.
1 1) Munamato wezvipiriso uye zvegumi
2 2) Munamato wekupa kuna Mwari
3 3) Semuenzaniso munyengetero wezvipiriso
3.1 Chii chinonzi munamato wezvipiriso?
3.2 Nzira yekunyengeterera nayo zvipiriso zvechiKristu?
1) Munamato wezvipiriso uye zvegumi
Nhasi tinouya nezvipiriso zvedu zveakanakisa emari yedu uye kugadzirwa kwedu.
Isu takatsaura chikamu chemubhadharo wedu, muchikamu chawakatigonesa nacho.
Tarisa nemafaro izvo zvatinokupa iwe pazuva rino.
Isu takavimbisa nemiromo yedu kuti tinoshumirwa imi, saka nokuzvidira tinouya nemi zvipo zvedu.
Isu tinonzwisisa kuti iyi inguva yakatarwa pamberi pako, uye tinobata neruremekedzo rwatinununura nhasi.
Mwari, tinopa kubwinya nekuda kwezita renyu; Ndokusaka tichiuya nezvipiriso izvi uye tichiuya kumatare ako.
Tinokutendai nekunatsa uye nekuchenesa hupenyu hwedu, nekuti nhasi tinonzwisisa kuti izvi zvipiriso zvinopihwa mururamisiro kune hukuru hwenyu uye nehumambo hwenyu.
Dai kuratidzwa kwekunamata kwedu kuchifadza iwe.
Isu tinopa kubwinya nekuda kwezita renyu apo tinosvitsa zvipiriso zvedu uye tichiuya pamberi pechiso chenyu. tinokuda iwe oh Lord!
Nhasi tichafarira kupa mupiro nezvekuzvidira, nekuti nemoyo wese tinoita izvi.
Namata uyu munamato wezvipiriso uye zvegumi nekutenda kukuru.
Zvipiriso uye chegumi inhungamiro yebhaibheri inoitwa chete nekuratidzwa nekuti kazhinji inyaya yekushoropodza uyo ane aya nheyo uye anozvishandisa muhupenyu hwavo hwezuva nezuva.
MuBhaibheri tinoona kuti vanhu vanoisa chegumi chavo vanhu vakobudirira mune imwe neimwe yehupenyu.
Zvipiriso zvinogona kuva zvese zvinobva pamoyo yedu, asi zvegumi, izvo ndezvaIshe, zvinounga gumi muzana yezvatinowana, kungave mari kana zvimwe.
Izwi rinotidzidzisa kuti Mwari pachavo vanotsiura iwo wekutirova isu chero isu tichiita nekuendesa zvegumi munguva yakakodzera uye nemoyo uzere nemufaro.
2) Munamato wekupa kuna Mwari
«Ishe ndinokutendai nekuda kwezvose zvamakandipa, nezvese zvamaita kuti ndikure.
Ndinoziva kuti dzimwe nguva handisi kukuonga zvikuru, asi panguva ino ndichave.
Zvese zvandakakohwa nhasi zvave kukura nekuda kwako.
Makandiita munhu akanaka.
Ndinokutendai mhuri yangu, shamwari dzangu, vanhu vepedyo.
Ndatenda nekundipa rimwe zuva rehupenyu,
Rimwe zuvazve rekukurumbidza uye kukuda, kukuda.
Pasina iwe panenge pasina munhu, ndatenda Ishe.
Ini handifi ndakabhadhara chikwereti changu kwauri, kuti ndikubhadhare pane zvese zvawakandipa.
Zvipiriso, kunyangwe tikazvisiira mudura kana kuti tikazvipa mumwe munhu, ndiMwari mumwe chete iye anozvigamuchira kudenga uye iye achatipa mubairo zvichienderana neupfumi hwaainadzo mukubwinya.
Kudaidzira ndekwe kupa zvipiriso nemoyo unofara nekuti izwi rinotiudza kuti anokomborera iye anofara nekuti saka hatingapi chimwe chinhu nemoyo uzere neshungu asi tinofara nezvatiri kupa.
3) Semuenzaniso munyengetero wezvipiriso
Nhasi tinounza zvipiriso zvedu uye zvipo zvedu kune yakanakisa yemari yedu uye kugadzirwa kwedu.
Takaisa parutivi chikamu chezvedu zvatawana,
iwo mugove mumwe chetewo wamakatipa mukutifambisa.
Tarisa nekunakirwa uye nerudo izvo izvo zvatinokupa iwe pazuva rino.
Isu takavimbisa nemiromo yedu kuti tichakushumirai,
Ndokusaka isu tichizvipira uye nokuzvidira tinokuunzira zvipiriso zvedu.
Isu tinonzwisisa kuti iyi inguva yekupemberera pamberi pako,
uye tinobata neruremekedzo uye tine hanya izvo zvatinoendesa nhasi.
Mwari, tinopa kubwinya nekuda kwezita renyu;
Ndokusaka tichiuya nezvipiriso izvi uye touya kutembere yako.
Tinokutendai nekurerutsa, kunatsa uye kuchengetedza hupenyu hwedu,
nekuti nhasi tinonzwisisa kuti izvi zvipiriso zvinopihwa mukururamisira ukuru hwako uye humambo hwako.
Isu tinopa kubwinya nekuda kwezita renyu apo tinosvitsa zvipiriso zvedu uye tichiuya pamberi pechiso chenyu, tinonamata imi Ishe.
Nhasi tichafarira kupa mupiro nezvekuzvidira zvipo uye rubatsiro, nekuti nemoyo wese tinoita izvi.
Mupfungwa iyi tinoona kuti izwi rimwechete raMwari rizere nemienzaniso isingaverengeke. Mumwe wavo uye akasimba isu tinomuona ari iye mumwechete Abrahama anozivikanwa sababa vekutenda, akaedzwa uye akakwanisa kununura mwanakomana wake amene kana ishe asina kumupa mhuru kuti amupe.
Pano tinoona muenzaniso wekuteerera uye seizvi pane vazhinji vazhinji kubva kwaari vatinogona kudzidza dzidziso dzakakosha kwehupenyu hwedu hwese.
Chii chinonzi munamato wezvipiriso?
Tinonamata panguva yekupa kuti Ishe ropafadzai chiitiko chatiri kuita. Kuva Mwari mumwe chete iye anowanza mari yedu, kutitungamira kuti tizvipe kune iye anoida uye kuti isu tigare tine chishuwo icho mumwoyo medu kupa chipo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvipiriso hazvigari mumari asi zvinogona kuitwa chero chinhu. Semuenzaniso zvakajairika kuona michero kana maruva zvinopihwa uye zvese zvinogamuchirwa naShe.
Nzira yekunyengeterera nayo zvipiriso zvechiKristu?
Izvi, fanika minamato yoseIzvo zvinofanirwa kuitwa kubva pakadzika dzemoyo yedu uye nekuziva kuzere zvatiri kuita.
Nguva zhinji, sekupa kuri chimwe chinhu chemuviri, isu hatisi kuziva kuti chiitiko chekunamata uye ichi ndicho chinhu chisingakanganwe neimwe nzira nekuti ndiMwari iye amene anotora zvipiriso zvedu uye anozotipa mubairo zvichienderana nehupfumi hwake kubwinya
Munamato wezvipiriso zvine simba uye zvegumi ndizvo zvinoitwa nekutenda, tichitenda kuti Mwari pachavo ari kutiteerera uye nekuve iye iye anotipa mhinduro yezvatiri kukumbira, kungave kwenyama kana kwemweya, isu tinofanira kugara tichinamata kubva kumweya uye nekubatana zvakananga naMwari musiki wese ane simba uye muridzi wezvinhu zvese. .